11. Al-baqarah 190 - 209
DAAWO SAWIRO:- Ra�isul wasaare Saacid oo ka qayb galay furitaanka laba dakadood oo cusub oo maanta laga dhagax dhigay Djibouti.
on September 08 2013 Ra�iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon �Saacid� oo marti-sharafta koowaad ka ahaa munaasabad balaaran oo lagu furayay dekaddii 6-aad iyo 7-aad ee dalka Djibouti oo uu weheliyo madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaa ay dhagax dhigeen dakadaha cusub ee Djibouti oo qaban doonta adeegyo kala duwan.
Ra�iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay dalka Djibouti munaasabadihii lagu dhagax dhigayay labada dakadood ee Dameer-joog iyo Dorale oo fulin doona adeegyo badan oo dalka iyo gobolka ah.
Ra�iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu aaminsan yahay, kuna shaqayn doono fikirka ah in dakadaha gobalka iyo Soomaaliya la balaariyo isla markaana la casriyeeyo dhamaan dakadaha ku yaala xeebaha Soomaaliya si ay ugu adeegaan Soomaaliya iyo Geeeska Afrika.
�Hammigu waa in ka sokoow khayraadka Soomaaliya la abuuro dhaqaale kasoo xarooda Dakado casri ah, Soomaaliya waxaa ay leedahay Xeebta ugu dheer Afrika iyo Bad khayraad badan.� Ayuu yiri Ra�isul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi faarax Shirdoon Saacid.
Ra�isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku jooga dalka Djibouti booqasho rasmi ah oo qayb ka ah xiriirka iskaashi ee dhinacyadda Amaanka, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka Djibouti ee aan walaalaha nahay iyo Soomaaliya.
Afhayeenka Xukuumadda Federalka Somalia
Djibouti, Mob: +25377093297